Maamulka Mahaddaay oo codsaday gurmad deg-deg ah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Mahaddaay oo codsaday gurmad deg-deg ah.
Maamulka Mahaddaay oo codsaday gurmad deg-deg ah.
Maamulka Degmada Mahaddaay ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in ay cudurro ka dhasheen fatahaadda Webiga Shabeelle ee mara tuulooyimka Hoosyimaada Degmadaas oo kal hore ku soo butaacay xaafado ka mid ah magaalada.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bulshada Degmada Mahaddaay Mudane Saalax Fuleel Xaaji oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in xaalado nafaqi darro ah ay ka jirto magaalada, isagoo intaa ku daray in weli xaafado ka mid ah magaalada ay biyo fadhiisad noqdeen.
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha bulshada Degmada Mahaddaay ayaa sheegay in Webiga Shabeelle uu ku fatahay magaalada iyo tuulooyin kale oo hoostaga Degmada Mahadaay, iyadoo dadku aysan heysan Hooy iyo adeegyada kale ee aas aaasiga u ah nolosha beni’aadamka.
Saalax Fuleel Xaaji ayaa hay’adaha samafalka, Madaxda Hirshabeelle iyo dowladda Federaalka ka codsaday inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadka ku dhibaateysan magaalada Mahaddaay iyo deegaannada kale ee hoostaga.
Previous articleGuddiga Madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo Baarlamaanka warbixin u gudbin doona.
Next articleWasaaradda Arrimaha Gudaha oo dar-dargelineysa dhismaha Galmudug loo dhanyahay.